October 2020 – Kalfadhi
Guddiga Maaliyadda ee Baarlamaanka Koonfur-Galbeed oo kulan la yeeshay xubno ka socday Xafiiska Hanti-dhowrka Guud
October 31, 2020 October 31, 2020 Hassan Istiila
Guddiga Maaliyadda, Qorsheynta, Ganacsiga iyo warshadaha ee golaha wakiilaha KGS ayaa maanta xubno ka socday Xafiiska Hanti-dhowrka Guud ee Koonfur-Galbeed kulan kula yeeshay hoolka shirarka ee gudiyada Barlamaanka. Kulanka ayaa ajendihiisu waxaa uu ahaa, dhegeysiga warbixin guud oo ku saabsan hindise-sharciyeedka Hanti-dhowrka guud ee DGKGS. Kulanka waxaa shir-guddoominayey gudodomiyaha gudiga maaliyadda Mudane. Xildhibaan Saciid Ahmed Cali. Hassan Istiila Mogadishu, Somalia
Guddiga Doorashada Guddoonka Baarlamaanka 2-aad ee Hirshabelle oo maanta la magacaabay
October 31, 2020 Hassan Istiila
Guddoomiyaha ku meel gaarka Baarlamaanka 2-aad ee Hirshabelle ayaa maanta magacaabay Guddiga Doorashada Guddoonka Baarlamaanka, kaddib markii maanta la dhaariyay xildhibaannada. Guddigan ayaa ka kooban 9-aad xubnood, waxaana guddoomiye u ah xildhibaan Yusuf Sheekh Xasan. Halkan ka akhriso:
Xildhibaannada Golaha Shacabka oo muddo-kordhin u sameeyay Guddiga Madaxabanaan ee Xuduudaha iyo Federaalka
Mudanayaasha Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Soomaaliya oo maanta kulankoodii caadiga ahaa ku yeeshay Mogadishu, ayaa muddo kordhin u sameeyay Guddiga Madaxabanaan ee Xuduudaha iyo Federaalka. Guddiga arrimaha gudaha ee Golaha Shacabka, ayaa soo jeediyay in afar sano oo dheeraad ah loogu daro, mudo-xileedka guddiga madaxabanaan ee xuduudaha iyo Federaalka. 145-Xildhibaan oo aheyd tirada guud ee Xildhibaannadii kulanka joogay ayaa u codeeyay in muddo afar sannadood ah loogu darro guddiga, sida uu ku dhowaaqay guddoomiyaha Golaha Shacabka. Hassan Istiila Mogadishu, Somalia
Xildhibaannada Golaha Shacabka oo ansixiyay wax-ka-bedelka sharciga Hanti dhowrka Guud ee Qaranka
Xildhibaannada Golaha Shacabka ee Baarlamaanka ayaa maanta u codeeyay wax-ka-bedelka sharciga Hanti dhowrka guud ee Dowladda, sharcigaasi oo Golaha la hor keennay bilo ka hor. Guddoomiyaha Golaha Shacabka Mudane Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan, ayaa maanta shir-guddoominayay kulanka, waxaa wax ka bedelka sharciga u codeysay 145-Xildhibaan oo ah tirada guud ee xildhibaannada kulanka joogay. Xoghayaha Guddiga Maaliyadda, miisaaniyadda, Qorsheynta iyo la xisaabtanka Hay’adda Dowladda ee Golaha Shacabka Xildhibaan Cabdixakiin Macalin Axmed, ayaa Golaha ka hor akhriyay muhiimadda uu dalka u leeyahay wax ka bedelka sharciga Hanti dhowrka guud ee Dowladda, waxaana…
Xildhibaannada Baarlamaanka 2-aad ee Hir-Shabeelle oo maanta la dhaariyay
Xildhibaannada Baarlamaanka 2-aad ee maamulka Hirshabelle ayaa maanta lagu dhaariyay Magaalada Jowharo, kaddib munaasabad kooban oo ay ka qeyb-galeen xubnaha Guddiga soo xulay Baarlamaanka iyo mas’uuliyiin kala duwan. Xildhibaannada ayaa dhaarinta kaddib, Maxamuud Siyaad Barqadle oo ah mudanaha ugu da’da weyn 90-ka Xildhibaan u xushay shir guddoon KMG ah, Mudanayaaaha cusub ayaa shaqadda igu weyn ee hortaalla waxaa ugu horreysa arrimaha doorashada Guddoonka Baarlamaanka iyo madaxweynaha maamulka. Hassan Istiila Mogadishu, Somalia
Xildhibaannada Baarlamaanka 2-aad ee Hirshabeelle oo maanta la dhaarinayo
Xildhibaannada cusub ee Baarlamaanka 2-aad ee dawlad goboleedka Hirshabeelle, ayaa lagu waddaa in maanta lagu dhaariyo magaalada Jowhar ee caasimadda Hirshabeelle. Qorshaha dhammaystirka xubnaha ka dhiman Baarlamaanka, oo ah 10 xubood, ayaa Magaalada laga dareemayaa. Xildhibaannada ilaa iyo hadda la magacaabay waa 90 Mudane. Munaasabadda dhaarinta waxaa ka qeyb geli doona mas’uuliyiin ka tirsan Hirshabeelle iyo guddiga farsamada soo xulista Baaarlamaanka labaad. Hassan Istiila Mogadishu, Somalia
Guddiga Hawlaha Guud ee Baarlamaanka Puntland oo kulan ka qaatay Wasiirka Ganacsiga, kaddib cabashooyin soo baxay
Guddiga Hawlaha Guud, ganacsiga iyo Kaabayaasha dhaqaalaha Golaha Wakiillada Dawladda Puntland ayaa kulan deg-deg ah ugu yeeray Wasiirka Ganacsiga, Wershadaha iyo Maalgashiga DPL. Kulan-kaas oo ku saabsanaa cabashooyin ka jira Rugta Ganacsiga iyo Wershdaha Puntland oo ku aadan kala diridda guddiga Maamulka Rugta Ganacsiga iyo magacaabista xoghayaha Rugta Ganacsiga. Wasiirka Wasaaradda Ganacsiga, Wershadaha iyo Maalgashiga Cabdullaahi Cabdi Xirsi ayaa guddiga warbixin ka siiyey shaqada ay wadaan iyo dedaalo loogu jiro sidii loo xalin lahaa tabashada ganacsata ay soo gudbiyeen, islamarkaana wasaaraddu ay diyaar u tahay u qaareemidda iyo taageeridda Rugta…
Madaxweynaha Hirshabeelle oo magacaabay xubnood ee Guddiga Doorashada Dadban
October 29, 2020 Hassan Istiila
Madaxweynaha Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare ayaa magacaabay 8-da Xubnood ee Guddiga Doorashada Dadban ee dowlad goboleedyada Hirshabelle, 8-da Xubnood ayaa waxaa wehlin doona 3 Xubnood oo ka imaan doona Federaalka. Halkan ka akhriso
Guddomiyaha Golaha Shacabka BJFS Mudane Mohamed Mursal Sheikh Abdurrahman, ayaa xalay magaalada Mogadishu uga qeyb-galay kulan loogu mahadcelinayay Guddonka Golaha iyo xildhibaannada Golaha Shacabka BJFS, sidii ay codka kalsoonida ah u siiyeen Ra’iisalwasaare Mohamed Hussein Roble iyo wasiirradiisa iyo barnaaminka xukuumadda. Kulanka waxaa ka qeyb-galay xildhibaanno ka tirsan Labada Aqal, Guddoonka Golaha Shacabka iyo siyaasiyiin kale, kuwaas oo dhammaantood muujiyay sida ay u taageersanyihiin xukuumadda hadda jirta. Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Soomaaliya ayaa 24-kii bishan Oct codka kalsoonida siiyay xukuumada cusub ee Ra’iisul Wasaare Rooble, taas oo ka kooban 27-wasiir,…
Guddoomiyaha Golaha Wakiillada DPL Mudane Gudoomiye Abdirashid Yusuf Jibril oo ay wehliyaan ku xigeenka 1aad Hon. Abdiaziz Abdullahi Osman, iyo ku xigeenka 2aad Mudane Ismaaciil Maxamed Warsame ayaa maanta shir-guddoomiyay fadhiga 4-aad ee Kalfadhiga 47-aad. Xildhibaannada ayaa maanta si rasmi ah u gudo-galay qodobka 1aad ee Ajandaha oo ka hadlaya Warbixinta Guddiga joogtada ee Golaha. Guddoomiyaha Golaha Wakiillada Dawladda Puntland Mudane Cabdirashiid Yuusuf Jibriil oo ka duulaya qodobka 42-aad farqadiisa 7-aad ee Xeer-hoosaadka Golaha Wakiillada Dawladda Puntland ayaa gudbinayey warbixintii Guddiga Joogtada ah ee Golaha Wakiillada DPL muddadii u dhaxeysay…